N'ogbe XJC-6F-D65-H24 Muti-axis Force Sensor rụpụta na ụlọ ọrụ | XJCSENSOR
Nzaghachi ngwa ngwa;
N'iji njide onwe onye na-egbochi onwe ya, ezigbo njirimara okpomọkụ;
Ihe mmetụta ahụ dị obere na obere dị elu, kwesịrị ekwesị maka obere ngwa ngwa;
N'iji ihe owuwu na-ebelata usoro, obere njehie crosstalk, nkwụsi ike ogologo oge;
Isi ngwa nke triaxial na isii-axis agha
Robotics feild: nzukọ akụrụngwa, polishing akụrụngwa, pịa akụrụngwa.
A na-ejikarị ihe mmetụta isii-axis eme ihe na mgbakọ robot na-agbazi robot.
Ahịa ngwa nke teknụzụ nyocha ihe mmetụta siri ike sara mbara, yana ọ bụ ngalaba nyocha teknụzụ dị mkpa ma ama ama ma n'ụlọ ma na mba ofesi. Ngwa nke ihe mmetụta a na-enwe mmetụta sensọ nwere ike ịsị na ọ nọ ebe niile.
Aerospace: Enwere ike ịtụle data nke nduzi na ịdị ukwuu nke ike mgbanwe oge na-arụ ọrụ na roket na steeti launching site na ike na-achọpụta ihe mmetụta sensọ arụnyere na onye nnabata ahụ;
Robot nke ọgụgụ isi: A na-eji ike mmetụta sensọ arụnyere na mkpịsị aka, ike na torque natara site na robot mgbe ọ bịara na kọntaktị na mpụga, nke nwere ike inye robot gburugburu ebe ịmara ike ma ọ bụ torque, gụnyere nsuso ụdị mpempe ihe na iduzi robot a kụziri nwere njikwa na-enweghị ike, ịrụkọ ọrụ ọnụ ọtụtụ, na-akpaka na ibudata ihe iji gbochie ihe ịda, isonye na ọrụ ahụike na ịwa ahụ, yana inyere ndị ọrịa aka na mgbatị.
Mgbanwe mgbanaka mgbatị: Ọtụtụ mgbanaka mgbatị na-eji ike / akara ngosi dị ka ngosipụta nke mmekọrịta mmadụ na igwe. Ike na-enwe mmetụta sensọ nwere ike ịmepụta mmekọrịta dị n’etiti ike na ebumnuche mmadụ, na-enyere ọgwụgwọ nhazigharị ihe ka ọ dị mma ma dị nchebe.
Ndụ kinematics: na asọmpi dị elu na ogologo ịwụ elu, a ga-eji ike mmetụta wee tụọ nha na ntuziaka nke ike ịwụ elu nke onye na-eme egwuregwu n'oge a na-ewepụ ya;
Automobile breeki ule: Ike na oge nduzi nke ọ bụla wheel nke ụgbọ ala nwere ike tụrụ site ike N'ịchọpụta sensọ.
Ntuziaka ngwa ahịa
Mgbanwe mgbanaka, polishing ígwè ọrụ na-, ịghọta robot ogwe aka, na-ejizi ígwè ọrụ
Nhazi ihe, nyocha mmiri, nlekota gburugburu, nyocha ahụike
Teknụzụ na mbara igwe, injinịa ndị agha
Nrụọrụ, ngwa ọrụ ugbo, njem, ngwa ụlọ, wdg.
Ihe mmetụta ike na-enye robot mmetụta nke aka, na-ekwe ka robot hụ ụwa nke ọma. Site na mmụba na-aga n'ihu nke ihe ngosi nke ngwa ngwa nke robot nwere ọgụgụ isi, ihe mmetụta ike isii nwere ike ịghọ akwa dị mkpa maka mmekọrịta mmadụ na kọmputa n'ọdịnihu.
Nke gara aga: XJC- NJ-A Torque mmetụta
Osote: XJC-2F-30-H90 Muti-axis Force mmetụta